Kulan qarsoodi ah oo ay yeelan lahaayeen Mareykanka iyo Taalibaan oo la baajiyay - JNN24
Kulan qarsoodi ah oo ay yeelan lahaayeen Mareykanka iyo Taalibaan oo la baajiyay
Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu baajiyay kulankii Axadda ah uu dalka Mareykanka kula qaadan lahaa madaxweynaha Afgaanistaan, Ashraf Ghani, iyo hoggaamiyayaal sarsare oo Taalibaan ka tirsan.
Baaqashada kulankan oo ahaa mid qarsoodi ah kana dhici lahaa Camp David ayaa yimid kaddib markii Taalibaan ay sheegatay inay ka dambaysay weerar dhawaan ka dhacay magaalada Kaabul kaas oo uu ku dhintay askari Ameerikaan ah.
Sargaalka ugu sarreeyay wadaxaajoodka Mareykanka Zalmay Khalilzad ayaa Isniintii ku dhawaaqay in ‘mabda’ ahaan’ heshiis nabadeed lala gaaray Taalibaan.
Heshiishka qabyada ah ee labada dhinac ayaa ku yimi kaddib sagaal wareeg oo wadahadallo ah oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo xubno matalayay Taalibaan, kulamadaas oo ka dhacay magaalada Dooxa, ee caasimadda dalka Qadar.
Heshiiska qabyada ah ayaa waxaa ka mid ah, in Mareykanka uu muddo 20 todobaad gudahii ah uu dalka Afghanistaan kala baxo 5,400 oo askari. Sikastaba xaalku ha ahaadee, Mr Khalilzad ayaa sheegay in meelmarinta ugu dambaysa ee heshiiskaasi uu go’aankeeda leeyahay madaxweyne Trump.
Weerrarka ayaa bannaanka soo dhigay cabsida ah in wadaxaajoodka u socda Mareykanka iyo Taalibaan uusan soo afjari karin qulqulatooyinka maalinlaha ah ee dalkaasi Afgaanistaan iyo dhibka soo gaaraya dadka rayidka ahba.
The post Kulan qarsoodi ah oo ay yeelan lahaayeen Mareykanka iyo Taalibaan oo la baajiyay appeared first on Jubbaland TV.
← Sare u kac ku yimid qiimaha Kalluunka ee degmada Kismaayo
Howlgallo ay ciidamada amniga sameeyeen seddexdii billood ee lasoo dhaafay oo guuleystay →